Ungaweli Inkohliso "Yobukhona Bendawo" | Martech Zone
Musa ukukhohlisa “Ubukhona Bendawo”
ULwesihlanu, May 2, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, i-2014 Douglas Karr
Ucingo lwami lukhala usuku lonke. Izikhathi eziningi ngiba semihlanganweni namakhasimende kepha kwesinye isikhathi kuhlala kuvulekile edeskini lami ngenkathi ngenza umsebenzi. Lapho ifoni ikhala, ngiyabuka futhi kuvame ukuba nekhodi yendawo engama-317 eshaywayo. Kodwa-ke, le nombolo ayikho koxhumana nabo ngakho angiboni ukuthi ngubani ngempela lowo ongishayelayo. Nginoxhumana nabo abangaphezu kuka-4,000 efonini yami - okuvumelaniswe ne- LinkedIn futhi Evercontact… Ngikhomba kahle wonke umuntu ongibizayo.
Kepha lokhu kwehlukile. Le yinkampani yokuthengisa ephumayo ekhipha ama-317 ikhodi yendawo ukuzama nokwenza ngcono amathuba okuthi ngithathe ifoni. Ngokukhuluma noBill Johnson - iklayenti lethu, uchwepheshe kwezentengiso ephumayo, nomsunguli we Ukuthengiswa, lokhu kwaziwa njenge ubukhona bendawo futhi iyi-panacea yakamuva yobuchwepheshe bokushaya obuphumayo.
Nasi isibonelo esivela I-RingDNA:
Inkinga ngobukhona bendawo ukuthi iqala ngokushesha ukuxhawula phakathi komthengisi nethemba ngokuzibandakanya okungathembekile. Kulesi sikhathi esiphila kuso, lapho abathengi bafuna ukucacisa nokwethembeka okuthe xaxa ezinkampanini, lokhu kungqubuzana ngqo.
Ubukhona bendawo kudlangile futhi kuyakhula embonini… futhi kuyakhohlisa futhi kuyisiphukuphuku ngombono wami. Angizami ukushaya i-RingDNA - bangomunye wabathengisi abangamakhulu abathengisa lesi sixazululo futhi owokuqala engithole ividiyo kuYouTube. Kepha ngenkathi ividiyo ye-RingDNA ithinta inani lamakholi aphenduliwe noma abuyisiwe, ayihlinzeki ngokuqonda ngomonakalo owenziwe ekuthengisweni kwakho ngokusebenzisa le ndlela ekhohlisayo.
Doug Hansen, Sr. Umphathi Wezokuthuthukiswa Kwama-Akhawunti ka Turn, ngokungazi bathathe ucingo oluvela kumthengisi owayekade ekhipha eyabo amakhono we-local-dial. Ngaso leso sikhathi wacabanga kancane ngobuqotho bomthengisi yize ayekwazi kusengaphambili ukuthi benzani.
Nginokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-30 kwezentengiso, kufaka phakathi ukuhlola ngocingo futhi ngike ngazama izindlela eziningi ezahlukahlukene zokuqoqa izingcingo ezibuyisiwe noma ukuqoqwa njenganoma ngubani. Ngenkathi ngikuqonda ukuheha kwe- izinombolo zendawo ukuvela kumazisi womshayeli wethemba, ngithola ukuthi ukwenza njalo kuvame ukusikisela ithemba abalikhohlisiwe abalithathayo futhi lenze umgoqo wokunganaki okudingeka kwephulwe ekuqaleni. Ngenkathi lezi zindlela zisebenza ekufinyeleleni kulokho okushesha ngokushesha futhi zidlulisa nokuthi asibonisi lutho futhi asibeki obala endleleni yethu futhi sibukela phansi indlela eya ebudlelwaneni bokuthembana.
UDoug ukusho kahle. Noma isilinganiso sokuphendula sinyuka lapho ushaya ngekhodi lendawo efanayo, angicabangi ukuthi izinga lokuguqulwa kwakho liyanda nalo. Angikholwa nokuthi awubeki wonke umjikelezo wokuthengisa engcupheni ngokuqala ngonyawo olukhohlisayo.
Ukwethembeka nobuqiniso kuyizikhiye kukho konke ukuthengisa. Ungazibeki engcupheni ngokukhipha amakhodi endawo!
Tags: ikhodi yendawoukushayaubukhona bendawoukuthengisa okuphumayoUkunika Amandla Ukuthengisangocingo
Ungakuvimbela Kanjani Ukwephulwa Kwemininingwane Kulomhlaba We-Omni-Channel
ICoPromote: Ipulatifomu Yokukhuthaza Umphakathi Yabashicileli
May 5, 2014 ku-9: 11 AM
Yebo, lokhu kungenye yalawo maqhinga asedlule usuku lokuphelelwa yisikhathi. Izinyanga eziyi-18 ezedlule lokhu kungikhohlisile ezingcingweni ezimbalwa zokuqala, manje noma yini engathinti i-ID yocingo iyazitshwa…
Aug 3, 2015 ku-12: 30 AM
Yize lokhu kungabonakala njengokukhohlisayo, kunzima ukunganaki izinga lokuguqulwa kwempendulo elikhulile futhi ukusetshenziswa kwalo kusebenza kakhulu phakathi nezimo lapho A. iklayenti licele ucingo noma uB. Umsebenzisi wokugcina ungumthengi. Manje, uma uthengisa kuma-akhawunti e-C-suite noma ebhizinisi, ungasebenzisi ubukhona bendawo. Kepha ngokwethembana, ngangisebenzise leli thuluzi endaweni engaphambili (ngaleso sikhathi ukuthengisa kubathengi) futhi ukwethembana akuzange kulahleke. Bekungakhuliswa ngaso sonke isikhathi - "Ngabe niyasendaweni yini" lapho bengizobatshela khona ngohlelo lwethu lwefoni olunembile bese ngiphetha leyo nkulumo ngokuthi "kahle kakhulu?" Sobabili siyohleka futhi siqhubeke nocingo lokuthengisa. Okwamanje, izinga lokuphendula lenyuke ngaphezu kuka-400% kulolu hlelo lokusebenza oluthile. 4x amathuba okuvala ibhizinisi. Ngizothatha lezo zingqinamba noma yiluphi usuku.
Aug 3, 2015 ku-10: 54 AM
Kunezindlela eziningi zokukhohlisa ezithuthukisa amazinga okuphendula nokuguqula kuzo zonke izindlela, uRyan. Uthatha izingqinamba, angiyena umlandeli futhi angikholwa ukuthi izinkampani ezinhle ezinemikhiqizo nezinsizakalo ezinhle zidinga ukwenza izinto ngale ndlela.
I-Oct 6, i-2015 ku-2: i-15 PM
Ngabe lokhu ngeke kuthathwe njengokwephula umthetho weQiniso ku-ID Yomshayeli we-2009?
I-Oct 6, i-2015 ku-11: i-23 PM
Angiyena ummeli, kepha angikholwa ukuthi kunesidingo esithile sezomthetho sokuphoqa ikhodi yendawo ukufanisa indawo yangempela yalowo ofonayo. Cabanga ngedivayisi yakho ephathekayo… ngingaba seLas Vegas futhi ngishayele umuntu othile futhi u- “317” usazobhalisa.